China ephathekayo solar DC air cooler XK-05SY ifektri kanye nabaphakeli | XIKOO
ISolar ingamandla amasha ezemvelo, iXIKOO iphishekela izinto ezintsha zobuchwepheshe nokonga amandla nokuvikelwa kwemvelo, Kuthuthukisiwe futhi kwakhiqizwa i-XK-05SY ephathekayo yelanga engu-24v DC epholile. futhi iyaphatheka evaporative emoyeni epholile, elula ukuhambisa nokwengeza amanzi.
Umzimba omusha wepulasitiki we-ABS, i-Anti-UV, i-Anti-ukuguga, isikhathi eside sempilo. umbala omhlophe + oluhlaza okwesibhakabhaka / ompunga, ulethe ukuzwa okuhle nokusha. Ukubukeka kuklanyelwe ukuphana, okuhle futhi okuhle.
Ukusetshenziswa kwamandla okuphansi kakhulu kwe-0.07kW / h nokuhamba komoya okunamandla kwe-5000m3 / h, ikhava engu-20-30m2.
Izinhlangothi ezintathu zekhwalithi engu-5090 # ukusebenza kahle okungcono komphumela wokupholisa uju wezinyosi ngezihlungi zothuli, sebenza endaweni evulekile ukuletha umoya opholile nopholile ngaphakathi endlini.
Iphaneli yokulawula ubufakazi be-LCD yamanzi + isilawuli kude, kunezivinini ezi-3 ezihlukile, isikhathi esivumelana ne-24hours timer, amasondo wekhwalithi jikelele anezikhiye. Futhi kukhona ngaphezu kokuvikelwa komthwalo nempompo, i-Auto swing ukumboza indawo enkulu.
Amandla / Hz 24V
Indawo Yekhava Eyodwa 20-30m2
Ukuhamba komoya (M3 / H) 5000
Ukulethwa Komoya 5-8M
Umsindo ≤55 db
Ithangi Lamanzi 30 L
Ukusetshenziswa Kwamanzi 5-8 L / H
Isisindo sengqikithi 16Kg
Iyalayisha Ubuningi 257pcs/ 40HQ 100pcs / 20GP
Ukungena kwamanzi Ngokwenziwa ngesandla
Isicelo : I-XK-05SY ephathekayo yelanga DC yomoya opholile inokupholisa, ukufuma umswakama, ukuhlanzwa, ukonga amandla kweminye imisebenzi, kanye nomphumela oyisimungulu. Isetshenziswa kabanzi ekhaya, esitolo sehhovisi nakwezinye izindawo.
Langaphambilini indawo eyixhaphozi evaporative emoyeni epholile fan umphakeli XK-75 / 90SY
Olandelayo: ephathekayo solar ehlane DC emoyeni Ukupholisa fan XK-06SY
Umlandeli we-Dc Portable Air Cooler
I-Solar Fan Cooler
Iphaneli Yelanga Elipholile
Igumbi Elipholile Lelanga
amanzi angaphandle amanzi evaporative emoyeni cooler X ...
Solar iwindi 12 / 24v DC evaporative emoyeni cooler X ...